‘Awasebenzi amaphoyisa eTaylor’s Halt’ | News24
‘Awasebenzi amaphoyisa eTaylor’s Halt’
UMPHAKATHI wase-Elandskop ukhala ngesiteshi samaphoyisa saseTaylors Halt othi ikwampunzi edla emini njengoba amaphoyisa amaningi engawukhathalele umsebenzi wawo, ezenzela umathanda.
Amalunga omphakathi angathandanga ukudalulwa atshele i-Echo ukuthi ukubikwa kwamacala aqede angalandelelwa, kuyinsakavukela umchilo wesidwaba kulesi teshi. Ahaze lesi siteshi njengo ‘ masigcozi’ abantu abangasazihluphi nokubika amacala kusona, okunalokho sebekhetha ukuzibambela umthetho ngezandla.
Omunye wabantu abasanda kugqekezelwa kepha ongathandanga ukudalulwa ukhale ngokuhlukumezeka akatholile kulesi teshi njengoba egqekezelwe kathathu emzini wakhe ngesonto eledlule. Uthe emva kokuba kugqekezwe kwakhe uye kulesi teshi ukuyovula icala, watshelwa ukuthi abathatha amaqophelo eminwe (finger prints) bangaze bakwazi ukufika ngakusasa.
“Bafika ngakusasa kodwa ngenxa yokuthi lalinethe kakhulu ngayizolo bangitshela ukuthi amaqophelo eminwe ngeke besakwazi ukuwathola. Ngibe sengifuna umuntu ozongibuyiselela ifasitela. Ngalo lelo sonto kuphinde kwagqekezwa kwaphihlizwa lona ifasitela futhi.
“Ngifonele esiteshini, izingcingo zingangeni, ngaze ngagcina sengifonele umphenyi wecala othe akekho eMgungundlovu kodwa kuzofanele ngivule icala kabusha. Ngifonelwe ngisemsebenzini indodakazi yami ingitshela ukuthi kukhona umuntu embone eyaluza ngaphandle, ngizame ukufonela esiteshini izingcingo zingangeni.
Ngafonela abaku-10 111 abathe bazothumela amaphoyisa ekhaya. Ngize ngabuya mina emsebenzini amaphoyisa engakafiki, ngazama ukubheka umsolwa ngilekelelwa ilungu lomphakathi. Sihambise umsolwa esiteshini kodwa futhi wangagxivizwa ngisho izithupha.”
Leli lunga lo mphakathi lithi ngisho sekugqekezwe okwesithathu, amaphoyisa awakhombisanga ukuzwelana naye, okugcine ngokuthi umsolwa abuye asabise indodakazi yakhe athe ikwazile ukumkhomba.
“Sihleli nje sithuka izanya ngoba ngisho nomseshi wecala ubengasatholakali. Ngigcine sengibika udaba kophethe amaphoyisa uMajor General Lucas Ngobeni oxolisile ngalesi sigameko. Kuyilapho eqale khona ukusukuma amaphoyisa. Okungikhathaza kakhulu ukuthi maningi amalunga omphakathi angakutholi ukusizakala futhi angayazi imigudu okumele ayilandele ukuze asizakale,” eqhuba.
Amanye amalungu omphakathi aqhube ngokuthi okwenza lokhu ukuthi isikhathi esiningi amaphoyisa aqashwayo awendawo, okwenza ukuthi agcine ewuthatha kancane umsebenzi.
“Kwesinye isikhathi uke uthi uma uzobika icala bagcine bekwehlisa isithunzi. Umphakathi usukhethe ukungawabiki amacala ngoba vele awusizakali. Omunye umama uke wayobika ukuthi indodakazi yakhe eneminyaka engaphansi kweminyaka engu-18 ithathwe omunye ujele. Esikhundleni sokuba bavule icala bathe akakhuze ingane yakhe. Kuningi nje abakwenzayo okukhombisa ukungawuhloniphi umsebenzi,” kusho leli lunga lo mphakathi.
Okhulumela amaphoyisa eKaputeni Musa Ntombela uthe babikelwe ngesigameko sakamuva sokugqekeza.
“Amaphoyisa aphenya icala lokugqekezwa. Into eyenza ukuthi amaphoyisa angatholakali ezingcingweni ukuthi kuke kwaba nenkinga yezingcingo esiteshini